KWI: CRM ejikọtara ọnụ, POS, Ecommerce na azụmaahịa maka ndị na - ere ahịa ọpụrụiche | Martech Zone
The KWI ifieddị Ahịa Commerce bụ igwe ojii, ngwụcha njedebe maka ndị na-ere ahịa pụrụ iche. Ihe ngwọta KWI, nke gụnyere POS, Merchandising, na eCommerce na-akwado site na otu nchekwa data, na-enye ndị na-ere ahịa ihe na-enweghị ntụpọ, ahụmịhe ọwa niile.
KWI ifieddị Ahịa Commerce
Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM) - nakọta data na ezigbo oge, yabụ na ọwa gị niile nwere ozi dị ugbu a. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịhụ ọkwa VIP, ihe omume pụrụ iche dịka ụbọchị ọmụmụ, ncheta ọmụmụ na ihe ndị ọzọ na-akpata, gosipụtara na POS iji mee ka onye ahịa ahụ dị mfe. Enedị ọcha data na de-duping na-eme ka ọ dị mma.
Ebe Ahịa (POS) - N'ime otu azụmahịa, ndị na-ere ahịa gị nwere ikike ịgbanye ahịa, nloghachi, iwu pụrụ iche, zipu ahịa ma nweta ngwaahịa sitere na ebe ndị ọzọ Ọ bụ ike iji nyefee ọrụ ndị ahịa pụrụ iche, n'ọbụ aka gị.
Chazụ ahịa - Nweta nnweta oge dị iche iche nke ahịa na ngwa ahịa ka ị wee nwee nghọta ngere nke ihe na-aga na azụmaahịa gị. Ngwọta KWI niile sitere na otu data data. A na-echekwa data data gị zuru oke ruo mgbe ebighi ebi na ọkwa ahụ, yana nyocha zuru oke na ọkwa 23 dị na ndị isi dị
ecommerce - All ike gị mkpa, gburu seamlessly gafee nyiwe. Enweghị data siled, atụmatụ ndị dị ka ike ịnwe ịhapụ ụgbọ ibu n'ịntanetị na-egosi na igwe ojii 9 POS gị.
Mgbochi Mfu - Chedo azụmahịa gị, na ala ala gị, yana nkewa ọrụ mgbochi ọnwụ anyị, The Zellman Group. Ztù Zellman bụ ọrụ mgbochi ọnwụ & ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ na onye ndu a ma ama na ọrụ mgbake maka mkpa obodo na nkwụghachi.
Ihe ngwọta nke igwe ojii KWI, gụnyere KWI Cloud 9 POS (iOS ngwa ngwa w / MDM management; patented), KWI Merchandising System (ihe nchọgharị dabeere), na KWI CRM System sitere na otu akwụkwọ ọkọwa okwu data.
Nke a na-enyere ndị na-ere ahịa aka ime mkpebi ndị ọzọ na a 360 Celsius ndị ahịa na nkwalite nkwalite, dabere na data gị niile, ọ bụghị naanị akụkụ ya.
Tags: 360 ogoCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịaecommerceecommerce n'elu ikpo okwukwikwi azụmahịamgbochi ọnwụahia ahiaNgwongwo ahiaomni-ọwanaaazụmahịa dị n'otukọntaktị dị n'otu